IETT မှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအတွက် ၃၅ ရက်ကန့်သတ်ချက်အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ၁၀၅ ခုကိုဖွဲ့စည်းမည်
Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဆောင်ရွက်ချက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ယနေ့နှင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေတို့တွင်မြို့တော် ၃၀ နှင့် Zonguldak တွင်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်မည်။ IMM ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်အလုပ်နှင့်အလုပ်သွားရာတွင်အခက်အခဲမရှိကြောင်းသေချာစေရန် [ပို ... ]
Corona မပါဘဲမပြီးဆုံးနိုင်သောနှစ်နှစ်အထိလူပေါင်းဘီလီယံငါးဆယ်ခန့်သည် ကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားရာတွင် covid-19 ရောဂါကူးစက်မှုသည် ၂ နှစ်အထိကြာနိုင်ပြီးကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏သုံးပုံနှစ်ပုံသည်ကိုယ်ခံအားမရရှိခြင်းသည်အဆုံးသတ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
HAVELSAN မှအလိုအလျောက်မောင်းသူမဲ့ KBRN ကင်းထောက်ယာဉ်
HAVELSAN အနေအထားတစ်ခုတည်ရှိသည်တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီ, CBRN ခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်အမျိုးသားရေးနှင့်ဒေသခံနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်ဆက်လက်။ တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးဓာတု, ဇီဝ, Radiological နှင့်နျူကလီးယား (CBRN) ကာကွယ်ရေး [ပို ... ]
မင်္ဂလာရှိသောအလုပ်သမားနေ့၊ မေ ၁ ရက်၊
ကျနော်တို့လက်လွတ်ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုပြန်သွားဖို့မျှော်လင့်; သူတို့တူရကီများအတွက်နေ့ညဉ့်မပြတ်ယူပြီးရထားလမ်းလုပ်သားတွေရဲ့အစစ်အမှန်သူရဲကောင်းများများမှာ! ၁၆၄ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းအင်အားတိုးမြှင့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားလမ်း ၀ န်ထမ်းများနဲ့ ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် [ပို ... ]
Baku Tbilisi Kars မီးရထားကိုပိုမိုအသုံးပြုသင့်သည်
ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးများကောင်စီဗွီဒီယိုညီလာခံတွင်၊ တာ့ခ်ဘီ - ကာဘီမီးရထားမီးမောင်းထိုးပြမှုတွင် Multimodal သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်္ကြံသည်တက်ကစ္စတန်မှ စတင်၍ အဓိကအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးအားအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Kyrklareli အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Osman Bilgin သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကဖေးအဖြစ်ဖွင့်လှစ်မည့်သတင်းကိုမကြာသေးမီလများကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်သမိုင်းဝင်ဘူတာရုံအဆောက်အအုံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါကျင်းပခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bilgin သည်မြို့လယ်ရှိသမိုင်းဝင်ဘူတာရုံအဆောက်အအုံတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပျင်းရိနေသည်။ [ပို ... ]
BaşakşehirKayaşehir Metro Line ကို ၀ န်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်လိမ့်မည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဥရောပတွင်ပထမ ဦး ဆုံးသောလူနာများအိပ်ရာခင်းထားခြင်းခံရသည့်အင်္ဂလန်ရှိBaşakşehir-Kayaşehirမက်ထရိုလိုင်းကိုဥရောပတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဥရောပတွင်ပထမဆုံးအနေဖြင့်ဆောက်လုပ်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ City Rail [ပို ... ]
နော်ဝေးနိုင်ငံ၊ Skien မြို့ရှိနောက်တွဲယာဉ်ပေါ်တွင်လှေကိုသယ်ဆောင်လာသည့်ထရပ်ကားတစ်စီးသည်မသိရသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်အဆင့်မြင့်ကူးတွင်ပိတ်မိနေသည်။ အဆင့်ဖြတ်ကူးခြင်း၏လုံခြုံရေးအတားအဆီးများကို TIR တွင်ပိတ်ထားပြီး၎င်းသည်ယို ထွက်၍ မရနိုင်ပါ [ပို ... ]
မျက်နှာဖုံးသည်ဗန်ရှိပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကုန်သည်များအားဖြန့်ဝေခဲ့သည်
Van Metropolitan မြူနီစီပယ်သည် Coronavirus အစီအမံများ၏အတိုင်းအတာအတွင်းမြို့တော်တွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်တက္ကစီမီနီဘတ်စ်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကအများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားကုန်သည်များအားမျက်နှာဖုံးများဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်၎င်း၏မော်တော်ယာဉ်များကိုပိုးသတ်ဆေးဖြန့်ဖြူးသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်သက်ရောက်သော Coronavirus ကပ်ရောဂါ [ပို ... ]
ဒိုင်းပါသောမျက်နှာဖုံးကို Ordu ရှိကုန်သည်များထံဖြန့်ဝေခဲ့သည်
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုစေ့စပ်စွာလုပ်ဆောင်သော Ordu Metropolitan Municipality သည်ဒေသ၏နေရာအားလုံးတွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိသည်။ ဤအခြေအနေတွင် Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်လည်းနိုင်ငံသားများကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကိုအသုံးပြုသည်။ [ပို ... ]
Imamoglu မှAtatürkမြို့ပြသစ်တော Annunciation .. !
Istanbul မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Ekrem remmamoğluသည်အစီအစဉ်များအပြီးတွင်Atatürk City Forest ဟုအမည်ပြောင်းလဲပေးသောHacıosman Grove တွင်စာမေးပွဲများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥယျာဉ်သည်အထင်ကြီးလောက်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
မြောက်ပိုင်းမာမာရာအဝေးပြေးလမ်း (၆) ပိုင်းရှိAkyazıခရိုင်ရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုလေ့လာခဲ့သည့်Karaismailoğluက ၆ ပေအဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ဖြစ်သည်ဟုသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ၀ န်ကြီးKaraismailoğlu, ၇၃ နှစ် [ပို ... ]
szmir ၏အရေးပါသောယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Alsancak ဘူတာရုံတစ်လျှောက်တွင်ရှိသောစပျစ်ဥယျာဉ်အဆောက်အအုံတစ်ခုသည်ယနေ့ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမိုင်းဝင်မျက်မြင်သက်သေများနှင့်တွေ့ဆုံရန် Izmir TCDD ပြတိုက်နှင့်ပန်းချီပြခန်းသည် Anatolia ရှိမီးရထားလမ်းမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Çamlık Steam Locomotive ပြတိုက်သို့မဟုတ်Çamlıkမီးရထားပြတိုက်သည် Izmir ၏Selçukခရိုင်ရှိÇamlıkရပ်ကွက်အတွင်းတွင်တည်ရှိပြီး open-air ရထားလမ်းပြတိုက်။ အကြီးဆုံးတူရကီအတွက်ဥရောပမှာအကြီးဆုံးမီးရထားလမ်းပြတိုက်နှင့်ပြတိုက် collection များကိုဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
Eskisehir ၌လမ်းများနှင့် Boulevards နွေရာသီအတွက်ပြင်ဆင်ပါ
မြို့လယ်နှင့်ရာသီဥတုပူနွေးလာမှုနှင့်အတူမြို့လယ်နှင့်ကျေးလက်ဒေသများတွင်လမ်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသည့်Eskişehir Metropolitan Municipality သည်ကျေးလက်ဒေသရှိဆောင်းရာသီတွင်ပျက်စီးသွားသောလမ်းများကိုပြုပြင်စဉ်မြို့လယ်တွင်မသွားပါ။ [ပို ... ]
ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကို Mersin ရှိယာဉ်ကြောများတွင်ဖြန့်ဝေထားသည်
Mersin Metropolitan မြူနီစီပယ်သည် Coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းနိုင်ငံသားများကိုကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ မြို့တော်၏နယ်နိမိတ်အတွင်းပြင်ဆင်ထားသည့်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များသည်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုမကျင့်သုံးသည့်တစ်ပတ်အတွင်းတွင်ယာဉ်ပေါ်မှခရီးသည်များနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ [ပို ... ]
Kocaeli Metropolitan Municipality ၏လက်အောက်ခံ TransportationPark သည်ဘတ်စ်ကားများနှင့်လမ်းရထားများအားလုံးတွင်လူမှုအကွာအဝေးသတိပေးတံဆိပ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူခရီးသည်များသည်ဘတ်စ်ကားနှင့်လမ်းရထားများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျ။ ကျန်းမာသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အားလုံး [ပို ... ]
Eurasia Airshow 2020 Fair ကိုဒီဇင်ဘာလအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်
လေယာဉ်ပြပွဲဥရောပအာရှလေကြောင်းပြပွဲတွင် 2020 အပေါ်အခြေခံပြီးတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးလေကြောင်းပြပွဲ 2-6 ဒီဇင်ဘာလ 2020 နေ့စွဲအပေါ် Antalya အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည်။ fairပြီလတွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောအဆိုပါပွဲတော်ကိုကပ်ရောဂါဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ တရားမျှတတဲ့ [ပို ... ]
အမျိုးသားကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်အရသမ္မတ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ပထမဆုံးအသုံးပြုသည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများယူဆောင်လာသည့်သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğan၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ပြင်ဆင်ခဲ့သောလေယာဉ်သည်လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်၊ [ပို ... ]
အဆိုပါ Covidien-19 ဆန့်ကျင်တူရကီရဲ့ Fight ရှင်းလင်းချက် WHO ကဝန်ကြီးများခင်ပွန်း
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဒေါက်တာတက်ဒရိုဂီရီဘီယက်စ်သဘာပတိအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်အစည်းအဝေးတွင် Fahrettin Koca ကတူရကီနိုင်ငံ Covidien-19 တိုက်ပွဲကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ video conferencing နှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည် [ပို ... ]
အလုပ်ခွင်၌ Coronavirus ကိုထိရောက်စွာတိုက်ခြင်း
မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီးဌာနသည် COVID-19 လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျန်းမာ။ ဘေးကင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောဘဝကိုရရှိစေရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသည်။ အန္တရာယ်ဝန်ကြီးဌာနပိုပြီးဖြစ်ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းများကရှေ့ပြေး, တူရကီအတွက်ဖြစ်ပွား၏ပထမဦးဆုံးအခိုက်အနေဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် [ပို ... ]
ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများမဖြစ်ပွားမီ ၃ ရက်အလိုတွင်တူရကီငြိမ်းချမ်းရေးယုံကြည်မှု၏နာရီများအတွင်းပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ လုံခြုံရေးအထွေထွေ ဦး စီးဌာန၊ Gendarmerie အထွေထွေစစ်ဌာနချုပ်နှင့်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့များသည် ၁၅း၀၂-၂၄း၀၀ နာရီတွင်ပါ ၀ င်သောအဖွဲ့များပါဝင်သည်။ [ပို ... ]
Karabükအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Fuat Gürelသည် Keltepe နှင်းလျှောစီးစင်တာသို့သွားသောလမ်းတွင်ပြည်နယ်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှစတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်လမ်းတိုးချဲ့မှုလုပ်ငန်းများအားစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်များထံမှအချက်အလက်များရရှိခဲ့သည်။ အခြေခံအဆောက်အ ဦ များနှင့်လမ်းချဲ့ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုရန် [ပို ... ]